चर्चामा बिमलको हेर ओइ दैब हेर ( भिडियो सहीत )::kamananews
चर्चामा बिमलको हेर ओइ दैब हेर ( भिडियो सहीत )
०१ फागुन २०७५ काठमाडौं । पछिल्लो समयका चर्चित मोडेल हुन बिमल अधिकारी। उनी बिमल अधिकारीले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो हेर ओइ दैब हेर बजारमा आएको छ।
प्रदीप अधिकारीको शब्द सिर्जनामा रहेको ‘हेर् ओइ दैब हेर्’ बोलको लोक दोहोरी गीत सार्वजनिक भएको छ।
युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको ‘हेर् ओइ दैब हेर्’ बोलको गीतमा गायिका विष्णु माझी र विनोद प्रिय श्रेष्ठको स्वर रहेको छ। त्यस्तै खेम सेञ्चुरीले लय सिर्जना गरेका छन्।
भावना म्युजिक सोलुसनले बजारमा ल्याएको उक्त भिडियोमा मोडल बिमल अधिकारी र साया भण्डारीले अभिनय गरेका छन्।
कपिल शर्माले निर्देशन गरेको ‘हेर् ओइ दैब हेर्’ बोलको लोक दोहोरी गीतको म्युजिक भिडियोको छायांकन स्रेश श्रेष्ठले गरेका छन् भने अमर शाक्यले सम्पादन गरेका छन्।
बन्दै ‘बागी ३’,टाइगरको साथमा को छिन् ?
बलिउडमा नायक टाइगर श्राफलाई स्टार बनाएको चलचित्र हो, ‘बागी’ । यो चलचित्रको दोश्रो सिरिज पनि बक्स अफिसमा हिट भयो । यसैले पनि टाइगर श्राफका लागि यो चलचित्र विशेष छ । यो चलचित्रको दोश्रो...
मनिता टप १० बाट बाहिरिइन्फि,लिपिन्सकी क्याट्रिओना बनिन् मिस युनिभर्स
२ पुस, काठमाडौं । मिस युनिभर्स २०१८ को ताज फिलिपिन्सकी क्याट्रिओना ग्रेले जितेकी छन् । थाइल्याण्डकको बैंककमा आज भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा फिलिपिन्सकी २४ वर्षीया क्याट्रिओनाले मिस युनिभर्सको ताज जितेकी हुन् । मिस युनिभर्सको ताज जित्ने...
विवाहपछि अब स्क्रिनमा चुम्बन गर्नुहुन्छ ? दीपिका पादुकोणले भनिन्, ‘छि !’
बलिउडको नवविवाहित जोडी दीपिका पादुकोण र रणबीर सिंहको भविष्यको योजनाबारे जान्न प्रशंसकहरु उत्सुक छन् । रणबीर सिंहले सन्तानको योजनाबारे हालै कुरा गरेका थिए भने अब दीपिकाले विवाहपछि अनस्क्रिन किसिङमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । फिल्मफेयरलाई...
‘छम्मा छम्मा’मा एलीको हट अवतार : भिडियो
बलिउडमा अहिले पुराना गीतलाई रिमेक गरेर तयार पार्ने चलन बढेको छ । यसैले बलिउडमा नयाँ गीतको अभाव भएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । यही क्रममा चलचित्र ‘फ्रड सैंया’मा समावेश ‘छम्मा छम्मा’ बोलको...
गीतकार अम्बिका गुरुङको ‘लाल्टिंग बालेर’ सार्बजनिक!
गायक तथा गीतकार लेखु सहयात्री को ‘लाल्टिंग बालेर’ बोलको गीत सार्बजनिक भएको छ। लामो समयदेखि कलम चलाउदै आएकी गीतकार अम्बिका गुरुङ को उत्कृष्ट शब्द संकलन रहेको यस गीतमा कोशिस छेत्रीको संगीत संयोजन रहेको छ भने ,लेखु...
बलिउड स्टारका येस्ता सम्म छन् निक नेम
उपनाम (निक नेम) त्यस्तो नाम हो जो साथीभाइ वा परिवारका सदस्यले प्रेमसँग बोलाउने गर्छन्। सनी र बबी देवलले त उपनामबाटै बलिवुड प्रवेश गरेका हुन्। केही कलाकारका उपनाम निकै प्रसिद्ध छन् जस्तो कि बेबो र...
नेपालको पहिलो ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ विजय
टेलिभिजन रियालिटी शो ‘भ्वाइस अफ नेपाल’को पहिलो नेपाल संस्करण सिडी विजय अधिकारीले जितेका छन्। शुक्रबार राति कतारमा भएको फाइनलमा अधिकारीले सबैभन्दा बढी भोट पाएर उपाधि जितेका हुन्। ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को विजेताका रूपमा उने २५ लाख...
को हुदैछन् नेपाल आइडल २ को बिजेता ?
एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल आइडल-२ मा उत्कृष्ट चारको बिहीबारको प्रस्तुति विशेष रह्यो। यिनै चारबाट अर्को साता नेपाल आइडलको विजेता घोषणा गरिनेछ। विक्रम बराल, रवि ओड, सुमित पाठक र अस्मिता अधिकारी चारै जाना फाइनलमा पुगेका...